လုလင်မောင် (ဝဲလောင်): လရောင်ကျူးရင့် ဝတ္တုစာအုပ်များ
C-box ကနေ mta တောင်းထားတဲ့ လရောင်ကျူးရင့် ရဲ့ဝတ္တုစာအုပ်တွေကို ကျွန်တော်လက်
လှမ်းမှီသလောက် ရှာဖွေပြီးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ နောက်ထပ်တောင်းထားတဲ့စာအုပ်တွေကိုလဲ အစဉ်
ပြေသလို တင်ပေးပါမယ်။ တောင်းထားတဲ့ စာအုပ်တွေက တော်တော်လေး များနေလို့ ဘယ်ဟာကို အ
ရင် စတင်ရမလဲ မသိဘူးဖြစ်နေတယ်။ တောင်းထားတဲ့စာအုပ်တွေကိုတော့ ကျွန်တော် ကြိုးစားပြီး တင်
ပေးပါမယ်။ အချိန်လေးတော့ နည်းနည်းပေးပါခင်ဗျာ။ အောက်မှာ ကြိုက်တဲ့စာအုပ်ကို ကလစ်ပြီးသာ
ဖတ်လိုက်ပါ။ အားလုံးပဲ ပျော်ရွင်ကြပါစေ.....ဗျာ။
(၂) ကောင်မလေးရဲ့ ဖူးစာရှင်
(၃) အပိုင်ရမှ ဖြစ်မယ်
(၄) သက်တံ မျက်စောင်း
(၅) သံသယမြူ အပိုင်း(၁)
(၆) သံသယမြူ (ဇာတ်သိမ်းပိုင်း)
(၇) လှိုင်းပြောသော ပင်လယ်အကြောင်း
(၉) မင်းနဲ့ ရှေ့ဆက်ချင်လို့
(၁၁) ခွင့်ပြုပါ ခွင့်လွတ်ပါ
PaPa 10 May 2013 at 13:20
ကျေးဇူးပြုပြီး ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင် လရောင်ကျူးရင့် ရဲ့ ကြာသုံးပွင့်အိပ်မက် ဇာတ်သိမ်းပိုင်းလေး တင်ပေးပါလားရှင် အဝေးမှာရောက်နေတော့ ပထမပိုင်းလေးဖတ်ပြီး ဇာတ်သိမ်းပိုင်းကို ဆိုင်မှာရှာမရ ဖြစ်နေလို့ပါ 2010 July ထုတ် ပါ ကျေးဇူးတင်လျက်
Anonymous 10 May 2013 at 19:22
i want to new books please
i want to read new books .thanks
ThZ per nay
ကျမလည်း လရောင်ကျူးရင့် ပရိတ်သတ်ပါ အိမ်က စာအုပ်မဖတ်ရလို့ တားထားလို့ ဘယ်လိုလုပ်ရမယ်မသိ ဖြစ်နေတာ အခုတော့ အတော့်ကို ပျော်ရွှင်သွားပါပြီ စာလည်းဖတ်လို့ရပြီ အိမ်က လည်းမသိတော့ပါဘူး ကျေးဇူး အထူးတင်ပါတယ် နောက်အသစ်ထွက်တဲ့စာ အုပ်တွေကို လည်း များများတင်ပေး ပါ
Anonymous 25 July 2013 at 23:47
လုလင်မောင် ဝဲကောင် မောင် ရင့်စာအုပ်က click တောင်
မရပါလား ။ mediafire pdf လေးနဲ့မှ အဆင်ပြေ မှာ
ဝဲကောင် ရ ဟဲ ဟဲ***
လရောင်ကျူးရင့်ရဲ့ ဖက်ဖူးရောင်နှင်းဆီ တင်ပေးပါလား
Anonymous 11 August 2013 at 13:09
ဘယ်လိုဖတ်ရမလဲလမ်းပြပေးပါဦး မမ ကိုကိုတို့
Can we please have more new book?
I am crazy in love with LYKYinh.
Sui 25 August 2013 at 16:17
Thz u Blogger :)
Anonymous 26 August 2013 at 12:53
လရောင်ကျူးရင့်ရဲ့ ဖက်ဖူးရောင်နှင်းဆီစာအုပ်လေး တင်ပေးပါလား။thank!
Thandar Saw 28 August 2013 at 13:54
Thandar Saw 28 August 2013 at 13:57
ဆရာမလရောင်ကျူးရင့်ရဲ့ ပရိတ်သတ်ပါ ဆရာမရေးသမျှ စာတွေအားလုံးဖတ်ပါတယ် တစ်လုံးမှမကျန်အောင်ဖတ်တာပါ စာတွေက လွှင့်ပစ်စရာ မရှိအောင် တန်ဖိုးရှိပါတယ်
အဆင့်တန်းရှိတဲ့သူက ဘယ်လိုစကားမျိုးပြောတယ် အဆင့်တန်းနိမ့်တဲ့အသိုင်းဝိုင်းဆိုဘယ်လိုစကားမျိုးပြောတယ် ဇာတ်ဆောင်တစ်ယောက်ချင်းစီရဲ့ စရိုက် သဘာဝအားလုံးကို စာနဲ့ထင်းထင်းကွင်းကွင်းမြင်အောင် ပြောပြနိုင်တယ် ဆရာမက တော်တော်, တော် ပါတယ် ပြောမပြတက်အောင်ပါ လေးစားပါတယ်ဆရာမ ......
jasmine6December 2013 at 01:00
အစ်မ ရဲ့စာအုပ်ကို ဟင်္သာငယ်ရဲ့မင်းသခင် က စပြီးဖတ်တာ မင်္ဂလာဦးမှာအထိပါပဲ။ စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ်။
ဂျူလိုင်မိုး7January 2014 at 17:35
Anonymous 26 January 2014 at 11:56
ချစ် ကလေးလေ3းFebruary 2014 at 11:30
Amayar Daewi 22 May 2014 at 11:58
လရောင်ကျူးရင့်ရဲ့ ဒီနွေဒီဆောင်းစာအုပ်လေး တင်ပေးပါနော် ..
Anonymous9July 2014 at 20:36
myatmon 25 August 2014 at 21:19
Wise Care 365 Pro 2.27.381
Window7Loader V2.1.1
မဟူရာ (လွိုင်ကော်) ဝတ္တုစာအုပ်များ
မောင်စိန်ဝင်း (ပုတီးကုန်း) ဝတ္တုစာအုပ်များ